I-Apple ngokungalindelekanga nangokuthe cwaka isungule 'iSifundo seNtetho yeSiri' | IPhone iindaba
Ingelosi Gonzalez | | Izaziso, Siri
Iinjongo zika-Apple zoku phucula umncedisi wakho weSiri bezisoloko zisonyuka ngokuhamba kweminyaka. Ukugxekwa akubeki uSiri phakathi kwabancedisi ababalaseleyo kwaye namhlanje zininzi iziphene ezifumanekayo xa kuthelekiswa nabanye abancedisi bakaGoogle okanye abancedisi be-Alexa. Nangona kunjalo, ukuhlala kwindalo efanayo neenkqubo zakho zokusebenza kwenza amava abe nomvuzo ngakumbi kunokuba kunjalo. U-Apple uthe cwaka nangokufihlakeleyo wasungula isifundo esitsha esibizwa ngokuba Isifundo seNtetho yeSiri nge usetyenziso olufihliweyo kwiVenkile ye App enokufikelela kuphela kwisimemo. Yintoni injongo? Phucula umncedisi wakho ngandlela thile.
Isifundo esitsha esisebenzisanayo esenziwe yi-Apple: 'Isifundo seNtetho yeSiri'
Iindaba zaxhuma TechCrunch: Inkqubo efihliweyo, engaxutywanga yafunyanwa kwiVenkile ye App ebizwa ngokuba yi Isifundo seNtetho yeSiri. Ngenkcazo encinci kunye nolwazi oluncinci kwizikrini, ophakathi waqhagamshelana noApple kwangoko ukuba sisifundo esinxulumene nokuphuculwa komncedisi weSiri inokufikeleleka kuphela ngesimemo.
Isicelo sikudidi lwezixhobo. Nangona kunjalo, Ayinakukhangelwa kwiinjini yokukhangela okanye kwiiapps ezipapashwe 'yiApple'. Yinto yesiporho ekuthi kuphela abo bafuna i-Big Apple babe nokufikelela kukhuseleko lwezinto ezimbini. Okokuqala, ikhonkco losetyenziso. Okwesibini, isimemo sokufunda esiza kuvumela ukufikelela kwizixhobo zangaphakathi zeapp.
Kukho amazwe aliqela aneSifundo seNtetho yeSiri esebenzayo, phakathi kwawo ingaseMelika, iJamani, iFrance, iCanada, iHong Kong, iIndiya, iIreland, iJapan, i-Itali, iMexico, iNew Zealand okanye iTaiwan. Ngaba amazwe amaninzi ahlukeneyo apho isifundo sifumaneka khona esenza ukuba sibone Iziphumo ezinokuba nazo ekuphuculeni umncedisi obonakalayo.
Ukuphuculwa kweSiri kwi-iOS nakwi-iPadOS 15 kuhlala kungonelanga
Isicelo ngolu hlobo ivumela umsebenzisi ukuba athumele ulwazi malunga neSiri ngendlela ebhalwe igama. Oko kukuthi, iapps ibhaqa xa umncedisi eviwe umbuzo kwaye uya kwazisa umsebenzisi ukuba athumele le rekhodi ngokujonga into ayithethileyo xa engemanyelwanga nguSiri. Ekugqibeleni, Uphononongo lujolise ekuphuculeni imveliso enkosi ngoncedo lwabasebenzisi abamenywe ngokucacileyo yiApple.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » U-Apple ngokungalindelekanga nangokuthe cwaka usungule 'iSifundo seNtetho yeSiri'
I-WhatsApp ye-iPad phantse ilungile